> Resource> iTunes> otú nyefee Music si iPod nano ka iTunes
Furu efu gị iTunes n'ọbá akwụkwọ, gụnyere 2,000 ngosi-etiri songs, ruru ka a na kọmputa okuku ma ọ bụ kọmputa reinstallation? N'agbanyeghị ihe bụrụ na ị chere ihu, ọ bụrụ na ị adịghị kwadoo elu na iTunes n'ọbá akwụkwọ, ị pụrụ ida gị niile songs na ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị kwadoo ha na gị na iPod nano, ị nwere ike adịghị nyefee songs si iPod nano ka iTunes, n'ihi na iTunes ga-akwụsị ha niile mgbe syncing na gị iPod nano.
Ọ bụrụ na ị nsogbu site na ya, luckily, ị na-nri ebe. A bụ otu ihe iPod nano ka iTunes transfer tool- Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-ọma e ka ike ka ị na nyefee music si iPod nano ka iTunes ọsọ ọsọ na mfe. Ke adianade do, ihe ọmụma banyere music, dị ka play adabere, Fim na skips, a ga-exported gị iTunes n'out oge. Na a usoro, ị nwekwara ike iṅomi music on iPod nano gị na kọmputa maka ndabere.
Bugharịa music si iPod nano ka iTunes Mfe
Na akụkụ n'okpuru, m ga-akọwa otú ịkwaga music on iPod nano ka iTunes n'ọbá akwụkwọ. The nzọụkwụ na-nnọọ mfe. Biko ibudata ma wụnye a usoro na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1. Launch a transfer na jikọọ na iPod nano na PC
Ihe mbụ mgbe ị wụnye a iPod nano ka iTunes transfer ngwá ọrụ bụ ẹkedori ya site abụọ-ịpị akara ngosi na PC gị na ihuenyo. Mgbe ahụ, nwere gị iPod nano jikọọ gị PC site na eriri USB. Mgbe a usoro na-achọpụta rụọ ya, ị ga-ahụ na mgbasa ozi na playlist na gị iPod nano na-egosi na ekpe kọlụm.
Cheta na: Biko ekwe nkwa na iTunes e arụnyere na kọmputa na-eme ka n'aka na nke a iPod nano ka iTunes transfer ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Nzọụkwụ 2. Copy music si iPod nano ka iTunes
Ke akpan window, pịa "Copy Music ka iTunes" iji bugote a window. Pịa "Malite". Ebe ọ bụ na mgbasa ozi faịlụ na-enyocha, ị kwesịrị uncheck ọzọ media faịlụ mgbe ị naanị chọrọ iṅomi music.Then, pịa "Detuo na iTunes". Nke a iPod nano ka iTunes transfer ngwá ọrụ ga-amalite mbupụ music ozugbo.
Mgbe ahụ, mbupụ iPod nano music ka iTunes Ọbá akwụkwọ, ị kwesịrị ị na pịa "Media", na taabụ na ekpe kọlụm. Nke a na-ahụ media window n'akụkụ aka nri. Pịa "Music" button. Họrọ songs na ị na-ekpebi nyefee iTunes n'ọbá akwụkwọ. Mgbe ahụ, pịa obere abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Export ka", na pịa "Mbupụ na iTunes Library". Ma ọ bụ dị nnọọ pịa "Smart Mbupụ na iTunes" button. Ọ bụrụ na ị kwaga ụfọdụ songs azụ iTunes n'ọbá akwụkwọ tupu, ọ ga-onwe gị si ebufe otu songs ugboro ugboro.
Cheta na: The Wondershare TunesGo arụ ọrụ nke ọma na iPod nano 7, iPod nano 5, iPod nano 6, iPod nano 2, iPod nano, iPod nano 3 na iPod nano 4.
E wezụga na-ebufe songs, na ị na-enwe ike nyefee playlist si iPod nano ka iTunes n'ọbá akwụkwọ. Pịa "Playlist" taabụ na ekpe kọlụm. na nri ebi ndụ, họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ wee pịa "Export ka". Na ndọpụta ndepụta, pịa "Mbupụ na iTunes Library".
N'oge transfer, cheta na gị iPod nano kwesịrị nọ ejikọta kọmputa oge niile.
Ọfọn, ọ bụ nnọọ mfe ka mmekọrịta music si iPod nano ka iTunes. Ntak ibudata a omume ka a na-agbalị?
Olee otú iji tọghata Rhapsody ka iTunes